Gaalaysiin Dareen - Talo Ku Saabsan Ragga Qaaliga Ah | Ragga Stylish
Gaalnimo shucuur waxay noqon kartaa xaalad aad u khatar badan marka loo eego gaalnimada jirka lafteeda, halka qofka aad nolosha la wadaagto uu xiriir jireed la yeeshay qof kale. Dad badan waxay u jabineysaa heshiis dhexmara lamaanayaasha maaddaama qaybta saamaynta leh lala wadaago qof kale.
Intuu ku jiray falkan waxaad la leedahay xiriir shucuur iyo saameyn leh qof, Lammaanaha iska soo horjeeda, looma arki karo inay tahay ficil sax ah, maadaama loo maleyn karo in mustaqbalka ay yeelan karaan xiriir jireed iyo gaalo gaalnimo.
1 Waa maxay gaalnimo shucuur leh
2 Sidee loo ogaadaa gaalnimo shucuur leh
2.1 Kordhinta ama yaraynta galmada?
3 Sidee looga gudbaa gaalnimada shucuurta
3.1 Daaweynta cilminafsiga si looga baxo gaalnimada
Waa maxay gaalnimo shucuur leh
Waxay dhacdaa marka labada qof ee lamaanaha midkood ah waxaad la joogtaa daqiiqado saaxiibtinimo iyo shucuur qof kale. Kuwo badan oo aqoonyahanno ah tani waa habka loogu abuuro gaalnimo shucuur maxaa yeelay waa jebineyso heshiis dhexmaray lamaanaha, maadaama ay macnaheedu noqon karo inaad jacayl la gasho qofka kale.
Dadka kale uma noqdo gaalnimo maxaa yeelay ma aysan gaarin xilligii dhammaystirka ama jinsiga, in kastoo kuwa kale ay la socdaan xaqiiqda ah inay jirto salaaxid fudud ama gacmaha isqabsashadu waa horeba. Khiyaano ama gaalnimo waa la tixgelin doonaa iyadoo kuxiran heshiisyada ama xadka ay ku heshiiyeen lamaanaha.
Sidee loo ogaadaa gaalnimo shucuur leh
Way fududaan kartaa in la ogaado in qofka kale laga yaabo la kulanno shucuur qof kale, laakiin sidoo kale way adkaan kartaa in la sii saadaaliyo haddii ay si gaar ah u keydsan yihiin. Tan waxaan ku tilmaami doonnaa taxane taxane ah si aad u ogaan karto xaqiiqadan.
Haddii aad ilaaliso wadahadal furan oo joogto ah lammaanahaaga, waad ogtahay taas mar uun wadahadalka markasta maskaxda ku hay qofkaas kale. Marar badan ayay noqon kartaa ka hadlida iyada si joogto ah xitaa samaynta isbarbardhig.
Xitaa awoodo sheeg wixii kugu soo kordhay adiga oo aan siinin ahmiyad badan, laakiin shaki ayaa kicin kara markuu xitaa kuugu yeero magaceeda ama magaceeda. Fasiraadaha aad ku darsan karto ayaa ah inaad u sheegeyso wax walboo kugu dhaca iyo waxa noloshaada ka dhaca ka hor lamaanahaaga.
Gaalnimo shucuur abuuri kara masaafad shaqsiyeed lamaanahaaga, uma baahnid inaad aragtid laakiin inaad ka dareento dhammaan xaaladaha. Sidoo kale, ma dareemaysid dareen isku dareen ah, dantii laga lahaa dejinta qorshayaasha ayaa hoos loo dhigay ama halgankii wada noolaanshaha ayaa lumay isagoo muujinaya inay jiraan waxyaabo aan dan ka lahayn.
Kordhinta ama yaraynta galmada?
Shaki la'aan tani waa arrinta ugu muranka badan. Way dhici kartaa in wehelkaagu dareemo rabitaan galmo oo aad uga badan sidii hore oo aad u firfircoon. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah qofka aan aaminka ahayn wuxuu soo bandhigayaa rabitaankiisa ama soo jiidashada jireed ee qofka kale wuxuuna u weecinayaa dhanka lamaanihiisa Dhinaca kale, ka soo horjeedka ayaa dhici kara, in qofka kale aad uga fog yahay iyo in rabitaankaaga galmada uu yaraanayo tartiib tartiib ah illaa ay ka noqoto wax aan jirin.
Sidee looga gudbaa gaalnimada shucuurta
Sidii aan dib ugu eegnay bilowgii, gaalnimo shucuur leh ayaa ka sii xumaan karta. Waxaa jira gaalnimo jinsiyeed halkaasoo lammaanuhu ay mid kale ula seexan karaan waqti ku habboon iyo si goos goos ah. Laakiin waxaa jira gaalnimo shucuureed markii horeba xiriir gaar ah ayaa la sababayaa qof kale in uusan ahayn lammaanaha laftiisa, xitaa haddii uusan galmo jirin.
Haddii aadan rabin inaad lumiso lammaanahaaga fursadda ugu fiican ayaa ah waji ka waji ugala hadal arinta. Waa inaad sharaxdo sida aad dareemeyso iyo sida loo arko waxyaabo ka hor xaqiiqda oo kale. Waa inaad kudartaa dhammaan faahfaahinta dhacaya, sida habdhaqankoodu isu beddelay, dhammaan calaamadaha ay helayaan iyo sida ay u dhaqmayaan.
Waa inaad u timaadaa fahamka macnaha guud iyo adigoon waligood gaarin heerkii ugu xumaa ee naceybka iyo yareynta rabshadaha. Waa lagama maarmaan in lagu gabagabeeyo iyadoo sharraxaad laga bixinayo xaqiiqooyinka lana go'aansanayo waxa xalka ugu fiican noqon kara.
Haddii aad go'aansato inaad sii wadato xiriirka, dadaal weyn waa in laga sameeyaa labada dhinacba. Xaqiiqdii go'aanka ugu dambeeya waa cafiska iyo ka guuleysiga gaalnimada noocaas ah. Waa inaad soo ceshataa xiriirka oo aad naftaada u cusboonaysiisaa jaaniskaas labaad.
Daaweynta cilminafsiga si looga baxo gaalnimada
Ma sahlana in laga gudbo gaalnimada oo lagu saleeyo khiyaanada noocan ah soo kabsashadu way adkaan kartaa. Tan awgeed, waxaa jira dad takhasus gaar ah leh oo loo qoondeeyay inay kaqeyb galaan dhibaatooyinka ka dhexeeya lamaanaha, oo ay kujirto gaalnimo.
Daaweynta cilmu-nafsiga waxay isku dayi doontaa inay lammaanaha ka dhigto mid qaab-dhismeed hab caafimaad qaba iyadoo la siinayo dhammaan qalabka aad u baahan tahay si xiriirkiinu dib ugu helo. Haddii ay dhacdo in nasasho dhacdo, isku day ayaa la sameyn doonaa niyadjab shaqo oo ay sababtay sababtaan. Xirfadlaha waa inuu dib-u-kiciyo isku-kalsoonaanta iyo isku-kalsoonaanta qofka ay dhibaatadu saameysey, oo ka dhigo kala taggu inuu u oggolaado inuu horay u socdo. Tilmaamo dheeraad ah waxaad ka akhrisan kartaa maqaaladeena "sida looga gudbo kala goyntaThetalooyin aad ku ilowdo qofkaagii hore".
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Gaalnimo shucuur